Burmese taste - Iora: အိုင်အုိုရာ့စတိုင် ဆယ်မွန်ငါးကင် ချိစ်ငရုတ်သီးကင် နဲ့ ဆလတ်ရွက်သုပ်
အိုင်အုိုရာ့စတိုင် ဆယ်မွန်ငါးကင် ချိစ်ငရုတ်သီးကင် နဲ့ ဆလတ်ရွက်သုပ်
ဆယ်မွန်ငါးကိုအိုးကင်းပူတုိုက်ပြီး ဆလတ်ရွက်သုပ်နဲ့ တွဲစားထားတာပါ။ ၀ိတ်တက်မှာကြောက်သူများအကြိုက်ပေါ့။း) စားထားတာတော့တစ်ပါတ်ကျော်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ အိပ်မပျော်တာနဲ့ ဘလော့လေးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အိုင်အိုရာ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဟောင်းတွေကိုပဲ
ဆယ်မွန်ငါးနဲ့ တွဲစားဘို့ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ငရုတ်သီးတွေကိုလည်း ခွဲပြီးချိစ်ထဲ့ပြီး အတူတူကင်လုိုက်ပါတယ်။ဒီငရုတ်သီးကချိုပါတယ်။
မြန်ကောင်းသက်သာသလားတော့မမေးနဲ့ ။ ငါးကိုဒီအတိုင်း Grill pan ထဲတင်ပြီးမှဆားနဲနဲဖြူး ငရုတ်ကောင်းနဲနဲဖြူးပြီး တဖက်ချင်းလှန်ပေးသွားတာပါ။ ငါးကမကျက်ခင်လှန်ရင်ပဲ့တတ်ပါတယ်။ လှန်တဲ့အချိန်မှာကပ်နေရင်ခဏဆက်ထားပါ။ ကျက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့ လှန်လို့ ရပါတယ်။ ဒယ်အိုးကိုငါးမကင်ခင်မှာ ဆီလေးနဲနဲဖြန်းပါတယ်။ စပရေးနဲ့ ဖြန်းတော့နဲနဲလေးဘဲဆီသုံးရပါတယ်။
ငါးလည်းတစ်ဖက်လှန်ပြီးပြီ။ ငရုတ်သီးထဲကချိစ်လေးတွေလည်းပျော်လာပြီ။ စားရခါနီးပြီ...း)
အင်ဒိုနီးရှားပုဇွန်မုန့် ကိုကြော်ထားလိုက်ပါသေးတယ် တစ်ဖက်ကနေ။
ထုံးစံအတုိုင်း အမေရိကန်စတုိုင်နဲ့ အိုင်အိုရာ့စတုိုင်ပေါင်းပြီး ဆလတ်ရွက်သုပ်ပါတယ်။ ဆလတ်ရွက်ကုိုအရွယ်တော်လေးတွေဖြတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလောက်ကိုသေးသေးစိပ်ထဲ့၊ ကြက်သွန်နီနုတ်နုတ်သေးသေးလှီး ငရုတ်သီးစိမ်းအနီတောင့်ဖြတ်ထဲ့ (အရောင်လည်းလှ မစားချင်ရင်လည်းရှောင်နုိုင်အောင်ပါ) Ricotta cheese နဲနဲထဲ့ ပန်းသီးနဲနဲစိပ်ထဲ့ နံနံပင်နဲနဲထဲ့ နှမ်းနက်လေးတွေနဲနဲထဲ့ (အဖြူထဲ့လည်းရပါတယ်။ ဒါလေးကပုိုလှလို့ ပါ) ပြီးတော့ငံပြာရည်နဲနဲ လိမ္မော်ယို နဲနဲ ဆီနဲနဲလေးထဲ့ပြီး ခရင်းနဲ့ တူနဲ့ သုံးပြီးဖွဖွလေးနယ်လိုက်ပါတယ်။ (အမေရိကန်တွေက dressing ကိုအခြေခံ အနေနဲ့ သံလွင်ဆီ၊ ရှာလကာရည်တစ်မျိုးမျိုး၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းထဲ့ပါတယ်။ (သူတို့ နှစ်သက်ရာအမွှေးရွက်တုို့ ၊ mustard အနှစ်တို့ ကိုထဲ့တာပေါ့လေ။ မထဲ့တဲ့သူလည်းမထဲ့ဘူးပေါ့) အုိုင်အိုရာကတော့ရှာလကာရည်ကိုနေရာတကာမှာမကြိုက်တတ်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးကအချဉ်တုို့ ယိုကရတဲ့ချိုချဉ်အရသာတို့ နဲ့ အစားထုိုးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေသံပုရာသီးပေါ့
အဲဒါဆုိုဒီလို လှလှပပနဲ့ ဆလတ်ရွက်သုပ်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။ လှလှလေးဆုိုတော့အရွက်မကြိုက်တဲ့ချစ်ချစ်လည်းစားကြည့်ပြီးအရမ်းကြိုက်တယ်လေ။ မတင်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခဏခဏသုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ညပိုင်းတွေမှာပေါ့။
ပန်းကန်ထဲမှာပန်းသီးစိပ် ဆလတ်ရွက်လေးတွေရံပြီးပြင်လုိုက်ပါတယ်။ ပန်းသီးပေါ်မှာဂျပန်Mayonaise တင်လိုက်ပါတယ် သူရောကျမရောကြိုက်လို့ လေ။ ပြီးတော့ ကြက်တံဆိပ်ငရုတ်ဆီကိုအစက်လေးတွေချလိုက်ပါတယ်။
ငါးလှီးတာနဲနဲသေးသွားတယ်ထင်ပြီး မ၀လောက်ဘူးထင်နေတာ။ ငါးကအသားချည့်ဆုိုတော့ရယ် အသုပ်တွေ အသီးတွေနဲ့ တွဲစားလိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးအရမ်းဗုိုက်တင်းသွားပါတယ်။ သူကထမင်းတောင်မစားဘူး။ အုိုင်အိုရာကတော့အဲဒီပန်းကန်ထဲကထမင်းကိုတူလေးနဲ့ ကော်ကော်စားတာဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ပါဘူး။း)
ပုံမှန်ဆုိုအုိုင်အိုရာ က Coke မကြိုက်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေယူလာတာကျန်နေတာနဲ့ သောက်ဖြစ်နေတာ ဒီလိုအသုပ်နဲ့ ငါးကင်နဲ့ ကျတော့လုိုက်ပါတယ်။
ပုဇွန်မုန့် ကြော်ထဲကို ထဲ့စားကြည့်တာလေ။ ပုဇွန်မုန့် ကြော်ကမြန်မာပြည်ကလိုမကောင်းပါဘူး။ ဒီလိုလေးတင်စားမှ စားလို့ ကောင်းသွားတာပါ။
ကဲ...အကြာကြီးနေမှတစ်ခါလောက်တင်ဖြစ်နေလို့ အချဉ်မပေါက်နေပါနဲ့ နော်။
အမြဲလာအားပေးနေသူသူငယ်ချင်းအဟောင်းများရော တိတ်တိတ်လေးပဲအားပေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်များရော ခုမှမျက်စေ့လည်ရောက်လာသူများရော လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေရှင်။ အိုင်အိုရာ့ ဒုိုင်ယာရီတွေ ခြစားသွားလို့ ရေးချင်တာတွေမရေးဖြစ်တာပိုမရေးဖြစ်ဘို့ ဖန်လာလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။
Posted by Iora at 6:13 AM
Labels: Fish, Salad, Veggie
^V^ May 30, 2012 at 6:44 AM
ဂလု ဂလု ရှလွတ်
ငါးကြော်နဲ့ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ၀ုန်း(တံတွေးမြိုချသံ)
:D .. စားချင်တယ် မမရေ
ညလေး အကြိုက်တွေချည်ပဲ :)
အိမ်မက်စေရာ May 30, 2012 at 8:43 AM
မမရေ...အိမ်မက်လာလည်ပါတယ်..ဒီနေ့ ဆလပ်သုပ်စားမယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာနဲ့ ကွက်တိပါပဲ..ပြင်ထားပုံလေးက လှပြီး တကယ့်ကို စားချင်စရာလေးပါ..။
Chaw Su May 30, 2012 at 9:03 AM
ငါးဆိုရင် အ၇မ်းကြိုက်ပြီးသားပါ။ ဒီလိုစားချင်စရာလေးလုပ်ထားတော့ ပိုပြီး စားချင်သွားတာပေါ့...း)
Snow May May 30, 2012 at 10:54 AM
ငါးကတော့ တကယ်ရေရေလည်လည်ကြိုက်တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကိုကြိုက်နေတာ. ကင်စားတာကတော့ အဆီမတက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် :)
မီးမီးငယ် May 30, 2012 at 5:06 PM
ဒီလိုကင်တာတွေဆိုင်တွေမှာ မီးနူးတဲမှာတွေ့ ရင်၊
subuueain May 30, 2012 at 5:50 PM
ပြင်ထားတာလေးက အရမ်းချစ်စရာကာင်းတယ်။ အားလုံး စားချင်စရာလေးတွေ :)
mstint May 30, 2012 at 6:21 PM
တီတင့်ရဲ့ သားနှစ်ယောက် အကြိုက်ပါလား အိုင်အိုရာရေ။ နည်းလေးတွေမှတ်သွားပြီ ကြည့်ရင်း ဖတ်ရင်း စားချင်လာပြီး)
ကျေးဇူး ကျေးဇူး စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။
Evy May 30, 2012 at 8:12 PM
Mar Mar Lwin May 30, 2012 at 9:25 PM
Iora May 31, 2012 at 12:00 AM
ညလေးကြိုက်မယ်လို့ သိပြီးသားပါ။း)
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ ဆလတ်သုပ်ထဲကိုကြက်ဥပြုတ်တို့ ဘဲဥပြုတ်တုို့ ထဲ့သုပ်လည်းကောင်းတယ်နော်။
ငါးကြိုက်တဲ့သူတွေများတယ်နော်။ ငါးကိုအဲလောက်ကြိုက်ကြမယ်လို့ ထင်တောင်မထင်ထားမိဘူး။း)
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကင်စားတော့ ဆီသိပ်မပါတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်တာပေါ့နော်။ မွှေးလည်းမွှေးတယ်။
ဆီမကြိုက်တဲ့သူဆုိုတော့ဒီလိုမျိုးဆုိုပိုသဘောကျမှာပေါ့နော်။ ဘာရယ်မဟုတ် အရွက်တွေစားရင်တောင်မီးမီး နဲ့ ကျူ့ တီကိုသတိရရနေမိတယ်။း)
တခါတခါကျတော့လည်းစုပုံထဲ့စားလုိုက်တာ ကိစ္စရှင်းအောင်လို့ ...း)
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေရှင်။ တီတင့်နဲ့ ဘလော့ဂါများလည်း (စာဖတ်သူများအပါအ၀င်)စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ဘေးရန်ကြောင့်ကြကင်းဝေးကြပါစေလို့ အိုင်အိုရာလည်းနေ့ တုိုင်းဘုရားရှစ်ခုိုးတိုင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ပါတယ်။
ငါးကြိုက်တဲ့သူတွေတော်တော်များတာဘဲမာမာရေ။ နော်။း)
Nyi Linn Thit May 31, 2012 at 12:29 AM
ငါးက ဖေးဘရိတ်ထဲမှာ မပါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးလေး ကြော်ထားတာတော့ တကယ့်ကိုပဲ စားချင်စရာ..၊း)
ဆလပ်ရွက် စိမ်းစိမ်းလေးတွေကို သုပ်ထားတာ ကြိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့လည်း ခဏခဏ သုပ်စားဖြစ်တယ်ဗျ၊
မအိုင်အိုရာရဲ့ နည်းတွေက အမြဲလိုလို မြန်၊ကောင်း၊သက်သာ မို့ လက်တွေ့ အသုံးဝင်ပါတယ်..။ Carry on sis..!!!
အိမ်ကအကိုတစ်ချို့ ကငါးမကြိုက်ကြဘူး။ ကျမရဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကလည်းငါးနဲ့ အသားဆုိုအသားပဲစားတော့ ယောက်ျားလေးတော်တော်များများငါးမကြိုက်ဘူးလို့ ဘဲယေဘူယျကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ယူဆထားတာ။ ကိုညီလင်းသစ်လည်းသိပ်မကြိုက်ဘူးဘဲ။း)
လက်တွေ့ အသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Brother ရေ။း)
စံပယ်ချို May 31, 2012 at 5:04 AM
မြတ်ကြည် June 1, 2012 at 4:33 AM
နည်း မျိုးစုံပဲနော်။ salmon ငါး သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အဲလိုပဲ မြတ်ကြည်က ကိုယ်နဲ့တည့်တာဆို မကြိုက်တာက များများ။ :D အမေကတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ်။
ဖတ်ချင်စရာသူ့ ကဗျာလေးလိုပေါ့နော်။း)
မ လည်းဆယ်မွန်ကိုကင်တာနဲ့ ကြော်တာတော့သဘောကျတယ်။
ဒါပေါ့ လူနဲ့ တဲ့တာတွေဆုိုလူတွေကသိပ်မကြိုက်ပဲ မတဲ့တာတွေဆိုပိုကြိုက်ကြတယ်လေ။ ဒါကြောင့်လည်းရှောင်ရတာတို့ လျှော့ရတာတုို့ လုပ်ရတာပေါ့..ဟုတ်ဘူးလား..း))
san htun June 1, 2012 at 9:21 PM
မမအိုင်အိုရာ ဆော်လမွန်ငါးက လှလည်းလှ စားကောင်းမှာ အသေအချာပဲ..အရွက်သုပ်ကလည်း မြန်လည်းမြန် အရသာရှိမှာ သေချာတယ်..လုပ်စားဦးမယ်ဂျ..
Anonymous June 1, 2012 at 10:11 PM
Iora June 1, 2012 at 11:07 PM
လုပ်စားစန်းထွန်းရေ။ တကယ်မြန်တာ ငါးကိုဘာမှမနယ်ပဲဆီဖြန်းထားတဲ့အိုးပေါ်တန်းတင်ပြီးမှအပေါ်ကနေဆားဖြူး ငရုတ်ကောင်းဖြူးဆုိုတော့စူပါဖတ်စ် ဘဲ။ အရွက်သုပ်လည်းအားလုံးပစ်ထဲ့ပြီးနယ်တာဆုိုတော့မြန်တာဘဲ။ တခုဘဲ အချိန်အဆတွေအရမ်းမများသွားဘို့ သတိထားနော်။ ဆလတ်ရွက်ကနုတော့ အများကြီးမလိုဘူး။ ပြီးတော့ငံပြာရည်တို့ အချိုတို့ balance ဖြစ်နေဘို့ ဘဲ။ ငံသွားတာတို့ ချိုသွားတာတို့ ဆိုရင်ပြင်ရခက်တယ်လေ။
Iora June 1, 2012 at 11:08 PM
Candy June 4, 2012 at 7:12 AM
စားလို့ကောင်းမယ့်ပုံနော်.. ပြင်ထားတာလေးလည်း သဘောကျတယ်..
အဲ့လိုလှလှလေး ပြင်ထားတော့ ပိုစားချင်တယ် :D
စားလို့ တော့တော်တော်ကောင်းတယ် ဗိုက်ပြည့်သွားပေမဲ့မအီနေဘူးလေ။ ဒီကလည်းလုပ် ကျွေးချင်ပါတယ်ရှင်ရယ်..း)
phung bella July 3, 2012 at 6:50 AM
အိုင်အုိုရာ့စတိုင် ဆယ်မွန်ငါးကင် ချိစ်ငရုတ်သီးက...